Hotendren’ny filoha amin’ity herinandro ity ny loholona | NewsMada
Hotendren’ny filoha amin’ity herinandro ity ny loholona
« Amin’ny fotoana mahamety azy no hovana ny governemanta. Mila mitandrina isika amin’ny resabe sy ny tsaho. Misy tsy andairany ary misy ny andairan’izany… Hotendrena amin’ity herinandro ity ny loholona… », hoy ny filoha Rajaonarimampianina tetsy Tsimbazaza, omaly.
Midika izany fa mety mialoha ny handehanany miatrika ny fihaonana an-tampon’ny Vondrona afrikanina ny faran’ny herinandro izao izany hanendreny ireo loholoha 21 izany. Tsiahivina fa maherin’ny 400 ireo kandidà nandefa ny antontan-taratasiny hotendren’ny filoham-pirenena, hanampy ireo 42 efa nofidin’ny mpifidy vaventy farany teo.
Ankoatra izany, niantso ny rehetra ho amin’ny fifanomezan-tanana ho an’ireo traboina any avaratry ny Nosy sy ny kere mamely ny any atsimo ny filoha Rajaonarimampianina, tamin’ny lahateniny tamin’izao fitokanana ny foibe fanofanana ho an’ny vehivavy sy ny trano famakiam-boky etsy Tsimbazaza izao.